Shirka Madaxda dowlad goboleedyada oo maanta ka furmaya Baydhabo iyo war murtiyeed laga soo saarayo – XAMAR POST
Shirkii labaad ee Golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ayaa maanta ka furmaya magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ee Koofur Galbeed, iyadoo maalinimadii shalay ay gaareen magaalada dhamaan Madaxda maamul goboleedyada.
Ammaanka guud ee magaalada Baydhabo ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaana shirka diiradda lagu saarayaa xaalada guud ee dalka, sida ammaanka, siyaasadda iyo arrimo kale.
Shirka ayaa ku soo aaday, xilli uu jiro khilaaf u dhaxeeya dowladda Federaalka iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada, iyadoo dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ay madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay hawada u marinayeen dowladda Federaalka dhaliilo iyo eedeymo.
Arrinta ugu weyn ee shirka hareyn doona ayaa waxaa ka mid ah arrinta Khilaafka Khaliijka oo sida muuqata Soomaaliya saameyn aan la fileyn ku yeeshay, xiriirka sii xumaanaya ee dowladda Federaalka iyo Imaaraadka Carabta, xaaladihii u dambeeyay ee labada dal iyo tallaabooyinkii dhacay.
Imaaraadka Carabta ayaa xiriir dhow la leh maamul goboleedyada, kuwaasoo madaxdooda qaar dhowaan booqasho ku tageen Abu Dhabi, sidoo kale waxay sii wadaan taageeradooda, halka ay joojiyeen taageeradii howshii tababarka Ciidamadda ee xaruntooda Muqdisho.
Shirkan ayaa ku soo aaday, iyadoo Madaxweyne Farmaajo uu booqasho ku joogo dalka Qatar oo horay dowlad goboleedyada ugu eedeeyeen in aanay wax tarin Soomaaliya, isla markaana Imaaraadka Carabta uu yahay dal xiriir soo jireen oo taariikhi la leh, isla markaana dhinacyo badan ka taageeray Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee waxaa shirka laga soo saari doonaa war murtiyeed quseeya xaalada dalka uu marayo, iyadoo mar kale maamul goboleedyada ay qeyla dhaan ka keeni doonaan tallaabooyinka Xukuumadda iyo Madaxtooyada.